Wiil Muslim 14-jir Ah Oo Muddo Koobaan Caan Kaga Noqday Caalamka Kadib Markii Si Khalada Loo Xidhay | Qodaal News
Wiil Muslim 14-jir Ah Oo Muddo Koobaan Caan Kaga Noqday Caalamka Kadib Markii Si Khalada Loo Xidhay
Axmed Maxamed ahna 14 jir ayaa muddo shan maalmood gudahood ah ku noqday qof dalka Maraykanka iyo dunidaba caan ka noqday kadib markii macalimad u dirtay shaqo guri ay ka shakisay wixii uu u keenay oo ahaa saacad uu iqtiraacay wiilka yar.
Madaxweyne Obama ayaa ku casuumay Axmed Maxamed inuu soo booqdo aqalka cad ee Maraykanka waxana uu ku dhiirigeliyay dadaalkiisa iyo aalada uu dinida ku soo kordhiyay. Wiilkan yar ayaa maskaxdiisa waxaa la fajacay dadka Maraykanka laga tilmaamo waxaana dadkii u soo hambalyeeyay oo la soo xiriiray kamid ah maalqabeenka caanka ah ee including Facebook CEO Mark Zuckerberg, haweeneyda u sharaxan madaxtinimada Maraykanka ee Hillary Clinton and NASA, waxana wiilkan uu aad ugu farxay markii uu maqlay in MIT oo ah Machad caan uu ka mid yahay hay’adaha u soo hambalyeeyay .
Obama ayaa u direy fariin wiilkan isagoo ku yiri:”Saacad wanaagsan,Axmed waa inaad keentaa Aqalka Cad.Waxaan ku dhiirigelin doonaa arday badan sida adigoo kale inay jeclaadaan sayniska, waana tan dalka Maraykanka uu ku noqday dal weyn. Hase yeeshee Saacada uu Axmed sameeyay ayaa weli waxa ay gacanta ugu jirtaa ciidamada Booliska. Waxana uu sheegay inuu jecel yahay in saacadiisa dib loogu soo celiyo.
‘Waxaan leeyahay waa noocii ardayga aan dooneynay,hal abuure kaligii wax ikhtiraaca waxaa tahay qofka noqon lahaa saynisyahan dunida wax u soo kordhiya ,’ayuu yiri saynisyahan caan ah oo lagu magacaabo Prescod-Weinstein. Saynisyahankan ayaa ku martiqaaday Axmed inoo soo booqdo Kayli Institute fo Astrophusics and Space Research.
Wiilkan yar ayaa Isniintii aynu ka so gudubnay waxa uu geeyay iskuulkii uu wax ka baranayay saacad uu isagu ku soo sameeyay gurigiisa si u soo bandhigo cashar loo dhigay balse qorshihiisii ayaa si kale isu bedelay. ‘Markii aan macalimada tusay,waxa ay noqotay mid xoogaa naxday, waxa ay aragtay waa saacad balse waxa ay iska dhaadhicisay in waxa la keenay uu yahay bam.Axmed ayaa la katiinadeeyay waxaana la geeyay saldhig Booliska isagoo markii la wadayay ku qeyliyay war waxaan keenay waa saacad ee ma ahan Bambaano ama wax kale.